दिल्लीमा सन्दीपले मौका पाउने चार समिकरण | Hamro Khelkud
दिल्लीमा सन्दीपले मौका पाउने चार समिकरण
एजेन्सी – नेपाली लेगस्पिनर सन्दीप लामिछानेले इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) मा दिल्ली क्यापिटल्सको टोलीमा स्थान बनाउन संघर्ष गर्दै आएका छन् ।
सुरुवात देखिनै बेन्चमा बसेका सन्दीपलाई प्लेइङ ११ मा स्थान बनाउन अन्य खेलाडीको प्रर्दशनमा पनि निर्भर रहनुपर्ने देखिन्छ । आइपिएलमा प्लेइङ ११ मा चारमात्र विदेशी खेलाडी खेलाउन पाइन्छ । दिल्लीले सुरुवात देखिनै चार विदेशी खेलाडीमा तीव्र गतिका बलर कागिसो रबाडा, एनरिच नोर्टजे, ब्याट्सम्यान शिम्रन हेटमायर र अलराउन्डर मार्कस स्टोइनिसलाई खेलाएको छ ।
आगामी खेलमा पनि यी चार खेलाडीलेनै निरन्तरता दिने दिल्लीको रणनीति देखिन्छ । विदेशी खेलाडीको रुपमा दिल्लीको बेन्चमा सन्दीपसँगै, अष्ट्रेलिया विकेटकिपर एलेक्स केरी, वेस्टइन्डिजका अलाउन्डर किमो पल र अष्ट्रेलिया तीव्र गतिका बलर ड्यानियल साम छन् । रबाडा, नोर्टजे, हेटमायर र मार्कस स्टोइनिसले राम्रो प्रर्दशन गरेका छन् । जसले गर्दा अन्य विदेशी खेलाडीलाई दिल्लीको टोलीमा स्थान बनाउन सहज छैन ।
सन्दीपका लागि यो कुनै नौलो कुरा भने होईन । यसअघिका सिजनमा पनि सन्दीपले टोलीमा स्थान बनाउन संघर्ष गर्नु परेको थियो । सन् २०१८ मा तीन र २०१९ मा ६ खेलमा मौका पाएका सन्दीपले २०२० मा त्यो भन्दा बढी खेल खेल्न पाउने धेरैले आशा गरेका थिए । आइपिएल भन्दा केहि दिन अगाडि सम्पन्न क्यारेबियन प्रिमियर लिगमा नियमित विकेट लिदै यूएई पुगेका सन्दीपले यस सिजनमा बढी मौका पाउन सक्ने धेरैले आशा राखेका थिए । तर त्यसो हुन सकेन ।
हाल दिल्लीको रणनीति र खेलाडीलाई हेर्दा सन्दीपले यस अघिका सिजनमा भन्दा पनि अझ कम मौका पाउन पनि सक्ने सम्भावना देखिन्छ । दिल्ली हालसम्म उपाधि जित्न र फाइनल सम्म पुग्न सकेको छैन । यस पटक उपाधिको सर्वाधिक बलियो दाबेदार दिल्लीले आफ्नो प्लेइङ ११ मा प्रश्न गर्ने ठाउँ राख्न चाहदैन ।
आइपिएल भई रहेका तीन स्थान मध्य आबूधाबी स्पिनरलाई सबैभन्दा बढी उपयोगी स्टेडियम मानिन्छ । छोटो बाउन्ड्री रेखाको कारण शारजाहमा दुई स्पिनरको सम्भावना कम छ । दुबई स्टेडियममा ठूलो बाउन्ड्री रेखा हुँदा स्पिनर बढी सफल हुन सक्छन् । सन्दीपले जारी सिजनको आइपिएलमा मौका पाउन सक्ने यी हुन् चार समीकरण ।
४. भारतीय तीव्र गतिका बलरको उच्च प्रर्दशन
भारतीय तीव्र गतिका बलरले उच्च प्रर्दशन गर्न सकेको खण्डमा सन्दीपलाई टोलीमा स्थान बनाउन केहि सहज हुने देखिन्छ । दिल्लीमा भारतीय तीव्र गतिका बलर कमजोर देखिएका छन् । जसको कारण दिल्लीले तीव्र गतिको बलिङ बलियो बनाउन रबाडाको जोडीमा नोर्टजेलाई खेलाएको छ । दक्षिण अफ्रिकी यी दुवैले उच्च प्रर्दशन गरेका छन् ।
पहिलो खेलमा मोहित शर्माले किंग्स इलेभेन पन्जाबबिरुद्ध ४ ओभरमा ४५ रन खर्चेर १ विकेट लिएका थिए । उक्त खराब प्रर्दशनको कारण दोस्रो खेलमा शर्माको स्थानमा आवेश खानलाई चेन्नई सुपर किंग्सबिरुद्ध खेलाएको थियो । आवेश खानले पनि ४ ओभरमा ४२ रन खर्चिएका थिए । तेस्रो खेलमा हैदराबादबिरुद्ध इशान्त शर्मा टोलीमा फर्किदा ३ ओभरमा २६ रन खर्चिदा विकेट लिन सकेका थिएनन् ।
हरेक मैदानमा तीन तीव्र गतिका बलर खेलाउने रणनीति देखिन्छ । जसमा दुई विदेशी खेलाडी खेलाउनु पर्ने बाध्यता छ । भारतीय तीव्र गतिका बलरले उच्च प्रर्दशन गर्दा दिल्लीले रबाडाका साथ मात्र मैदान उत्रर्न सक्छ । दुई भारतीय तीव्र गतिका बलरले उच्च प्रर्दशन गरेको खण्डमा सन्दीपको सम्भावना बढ्ने छ ।
३. शीर्ष र मध्यक्रमका ब्याट्सम्यानको उत्कृष्ट ब्याटिङ
पहिलो खेलमा पन्जाबबिरुद्ध नायक बनेका स्टोइनिस दिल्लीका चौथो रोजाईका विदेशी खेलाडी हुन् । चेन्नईबिरुद्ध ५ रनमा अविजित रहँदा बलिङ गरेनन् । हैदराबादबिरुद्ध स्टोइनिसले ११ रन जोड्नुको साथै ३ ओभरमा २२ रन खर्चेका थिए । दिल्लीको शीर्ष र मध्यक्रम ब्याट्सम्यान उत्कृष्ट छन् । तर नाम अनुसार प्रर्दशन गर्न आवश्यक छ ।
ओपनर पृथ्वी शा, शिखर धवन, श्रेयस ऐर, ऋषभ पन्त र शिम्रन हेटमायर शीर्ष र मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान हुन् । अजिंक्या रहाणे मध्यक्रमका एक भरपर्दा विकल्प हुन् । यी सबै ब्याट्सम्यान ठूलो इनिङ खेल्दै टोलीको जित एक्लै सहज बनाउन सक्छन् । जसले गर्दा शीर्षक्रम र मध्यक्रमका ब्याट्सम्यानले निरन्तर उच्च प्रर्दशन गर्दा दिल्लीले मार्कस स्टोइनिसको स्थानमा सन्दीपलाई मौका दिन बोटो खुल्छ ।
शीर्ष र मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान निररन्त चल्दा स्टोइनिसको आवश्यकता ब्याटिङमा कम हुन जान्छ । स्टोइनिसलाई छोड्दा अक्षर पटेल र रबाडाले तल्लोक्रमा ठूला सट खेल्न सक्छन् ।
२. दिल्ली पहिलानै प्ले अफमा पुग्नु वा बाहिरिनु
दिल्लीले सन्दीपलाई कम महत्व भएको खेलमा मौका दिने सम्भावना बढी छ । सन्दीपले त्यस्तो खेलमा मौका पाउन सक्छन् जुन खेलको हार वा जितले दिल्लीलाई खासै फरक पार्दैन । जसको लागि दिल्लीले लगातार जित निकाल्दै चार पाँच खेल अगाडिनै प्ले अफमा पुगेमा वा कमजोर प्रर्दशन गर्दै बाहिरिएमा सन्दीपले मौका पाउन सक्छन् ।
दिल्ली उपाधिको दाबेदार टोली हुँदा प्ले अफमा स्थान बनाउन काजगी रुपमा कठिन देखिदैन । लिग चरणमा हरेक टोलीले १४ खेल खेल्ने छन् । जसले गर्दा दिल्लीले लिग चरणका छिटोनै प्ले अफमा स्थान बनाएको खण्डमा सन्दीपलाई मौका दिन सक्छ । सन् २०१८ को पहिलो संस्करणमा सन्दीपलाई दिल्लीले लिग चरणबाट बाहिरिएपछि अन्तिम तीन खेलमा मौका दिएको थियो । यस पटक पनि त्यस्तै सम्भावना देखिन्छ । जुन खेलमा दिल्लीको कुनै महत्त्व थिएन ।
एलिमिनेटर, क्वालिफायर र फाइनलमा सन्दीपको सम्भावना कम छ । जसले गर्दा लिग चरणमा मौका पाउन पहिलानै प्ले अफमा पुग्नुपर्ने वा बाहिरिनु पर्ने हुन्छ । अन्तिम खेलमा प्ले अफ वा लिग चरणबाट बाहिरिनु पर्ने समिकरण बने सन्दीपले खेल खेल्न पाउने सम्भावना कम देखिन्छ ।
१. मिश्रा र आश्विनको खराब प्रर्दशन
सन्दीपले दिल्लीको टोलीमा मौका पाउन दुबै अनुभवी भारतीय स्पिनर अमित मिश्रा र रविचन्द्रन आश्विनको प्रर्दशन खराब हुनुपर्छ । दुबै भारतीय उत्कृष्ट स्पिनर हुँदा सन्दीपलाई मौका पाउन कठिन बनेको हो । स्पिनरमा सन्दीप तेस्रो विकल्प हुन् ।
सुरुवाती खेलमा भने यी दुवै स्पिनरले उच्च प्रर्दशन गरेका छन् । हैदराबादबिरुद्ध मिश्राले ४ ओभरमा ३५ रन खर्चेर २ विकेट लिएका थिए । चेन्नईबिरुद्ध ४ ओभरमा २३ रन खर्चेका थिए । पहिलो खेलमा आश्विनले एक ओभरमा २ रन खर्चेर २ विकेट लिएका थिए । आश्विन चोटका कारण पछिल्ला दुई खेल गुमाएका थिए । आश्विन फिट भइसकेका छन् ।
दिल्लीले यी दुई मध्य एकलाई नियमित मैदान उतार्ने निश्चित छ । अक्षर पटेललाई दोस्रो स्पिनरको रुपमा खेलाउने छ । जसको कारण यी दुबै स्पिनरले खराब प्रर्दशन गर्दा दिल्लीलाई सन्दीपलाई खेलाउनै पर्ने बाध्यता हुन जान्छ ।